Nidina an-dalambe am-pilaminana ny Ogandey ho fanoherana ny famonoana olona manao ho lasibatra ny vehivavy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Jolay 2018 5:28 GMT
Vakio amin'ny teny 한국어, Français, Swahili, Español, 繁體中文, Português, English
Ogandey manohitra ny fitomboan'ny famonoana sy fakana an-keriny vehivavy. Saripika: Katumba Badru, nahazoana alalana.
Hatramin'ny taona 2015, farafahakeliny 42 ny isan'ny vehivavy Ogandey nisy naka an-keriny, tapatapahana ary vonoina ao sy manodidina an'i Kampala, renivohitr'i Ogandà ary ny atsasak'izany tao anatin'ny telovolana monja tamin'ny taona 2017. Ny sasany tamin'ny vatana mangatsiaka nahitana soritra herisetra ara-pananahana.
Nampihoron-koditra ny fitohizan'ny famonoana olona, ahitana fitovizana maharikoriko rehefa tomorina akaiky. Mbola tsy mazava hatramin'izao ny antony anaovana izao famonoana izao, fa resaka mosavy no petrakevitra malaza eo amin'ny vahoaka [mg]. Mbola mitady izay tokana ahiahiana aloha ny manampahefana amin'izao.
Leon'ny miaina ao anatin'ny tahotra ny vehivavin'i Ogandà ka mahatsapa fa tsy maintsy manao zavatra ry zareo.
Tamin'ny 30 Jona 2018, nanao fihetsiketsehana milamina tao an-drenivohitr'i Ogandà ao Kampala ny Vondronasam-behivavy ho Fanoherana (WPWG), miaraka amin'ny feminista avy amin'ny firenen-kafa, ho fanoherana ny firongatry ny fakana an-keriny sy famonoana manao ho lasibatra ny vehivavy ao Ogandà.
Ary dia nanao ny dia(be) aho. Ho fahatsiarovana azy ireny, tsy nahazo rariny ry zareo ary mbola tsy nisy ny voatazona ho tompon'antoka tamin'ny fahafatesana mampaha-marikoditra nahazo azy ireny. Fa omeko voninahitra ry zareo. Mieritreritra azy ireo aho, ny fianakaviana sy ny namana nilaozan-dry zareo na akaiky na lavitra, fa (misy) tahotra sy fahatezerana (ao amiko)
Tamin'ny diabe, izay natrehin'ny Global Voices, nilaza tamin'ny vahoaka ny mpitarika ny WPWG, ny Dr. Stella Nyanzi, fa manohy amin'ny fidirana an-tsehatra amin'ny fanaovana dingana manan-danja ny vehivavy toy ny fitadiavan-drariny ho an'ny fianakavian'ireo novonoina sy ho fanosehana hisian'ny hetsika (fandraisana andraikitra) manoloana ny herisetra atao amin'ny vehivavy. Avy eo novakian'ny namana mpiara-mikatroka Patricia Twasiima ny anaran'ireo vehivavy 42 novonoina.
Talohan'izany, niezaka ny hanakana ny fihetsiketsehana ny polisy tamin'ny filazana fa efa voavaha ny raharaha anaovan'ireo vehivavy ireo fihetsiketsehana rehefa nanao kabary tamin'ny firenena nilaza ny drafitra teboka folo ho famerenana amin'ny laoniny ny filaminana ao Ogandà ny Filoha Museveni.
Nanambara ny taratasy iray avy amin'ny kaomiseran'ny polisy:
Natao izao ilazana aminareo fa ny fihetsiketsehana kasaina atao ho fanairana, ho fanehoana ny tsy fankasitrahana izao fitohizam-panomoana sy fakana ankeriny vehivavy/zazavavy izay dia tsy azo omena alalana.
Fa efa tapakevitra ny hanao fihetsiketsehana hatrany ny vehivavy na dia izany aza:
Tsy hamaly hamaha olana amin'ny kabary, eritreritra ary vavaka, avy amin'ny polisy sy ny governemanta izay tohanan'ny volan'ny mpandoa hetra intsony izahay. Fotoana izao hanaovana ny hetsika koa miaraha aminay rahampitso ao amin'ny Centenary Park satria mitady valiny avy amin'ny fanontaniana mbola tsy voavaly izahay
Vao maika moa nahatonga fanohanana betsaka avy amin'ny Ogandey, na lahy na vavy, ny fikasana handrara ny fihetsiketsehana, ka nampanantena ny ho avy ihany koa ny mpanao gazety.
Nanoratra ny heviny tao amin'ny Daily Monitor izay nandeha tao amin'ny Twitter amin'ny antony mahatonga azy hanatevin-daharana ny fihetsiketseham-panoherana ny mpanoratra Daniel Kalinaki:
Ka dia ho ao amin'ny diabe aho. Miaraka amin'ny zanakovavy. Hifampitantana izahay ary handeha, tsy hitondra fitaovam-piadiana ary am-pilaminana, miaraka amin'ny hafa. Tiako izy hitia ny firenenay ary hianatra, amin'ny maha-vehivavy afrikana azy, hijoro sy hiteny mafy. Rehefa lehibe izy, sy ireo hafa tahaka azy, dia ho mpamonjy ny torotoro, ny voavono ary ny voaozona. Tongasoa amin'ny Dian'ny Mainty – ary manantena aho fa hahay hihetsika ny polisy ka tsy handoto izany ho menan'ny rà.
Nilaza ihany koa i Mujuni Raymond, mpanao gazetin'ny fahitalavitra, fa hanatevin-daharana ny fihetsiketsehana:
Nandeha tamin'ireo sehatra namonoana vehivavy farafahakeliny miisa 13 aho ary nahita ny fiafarana mahatsiravina nahazo azy ireo. Tsy araka ny mahaolombelona ny manolotra fampanantenana sy vavaka fotsiny. Tsy maintsy misy ny hetsika atao.
Nihemotra nanoloana ny fanerena ny polisy. Nanaraka antsakany sy andavany ny toromarika napetraky ny polisy ny diaben'ny vehivavy.
Ity no fihetsiketsehana milamina voalohany notarihan'ny mpikatroka hatramin'ny nandaniana ilay lalàna mampiady hevitra Lalànan'ny fitantanana ny filaminam-bahoaka nolaniana tamin'ny taona 2013, izay manome fahefana goavana ho an'ny Inspektora Jeneralin'ny Polisy ahafahany manome alalana na mandrara ny fivoriana ankalamanjana. Nivadika ho herisetra hatrany ny fihetsiketsehana teo aloha hatramin'ny nandaniana ilay Lalàna.
Noporofoin'ny vehivavin'i Ogandà fa tsy voatery hisy herisetra ny fihetsiketseham-panoherana.
Niteraka tsindry mafy kokoa ho an'ny manampahefana ny ny diabe, tsy ho amin'ny fanomezana fiarahamonina azo antoka kokoa ho an'ny vehivavy ihany fa ho fanandratana ihany koa ny lalampanorenan'i Ogandà sy ho fampanajana ny zon'ny olom-pirenena halalaka hivory.